Home/अन्य खेलकूद/खेलकुदकी छोरी ………….‘सन्ध्या’……..!
“बिहानको ११ बज्दै थियो । म भर्खरै कार्यालयको काम सकेर खाना खान कोठामा पुगेकी थिंए । त्यही बेला एउटी महिला एक बालिका कोखामा समातेर म भए तिर आइन” विभा भन्दैथिइन -“धेरै बेर सम्म संगै बसिन दुःख सुखका गफ गरिन ।” यो घटना थियो २०७२ साल जेठको तेश्रो साताको । देश भुकम्पको पिडा बाट भर्खरै उठने तरखरमा थियो ।
Pingback: समाचार प्रभाव : खेलकुदकी छोरी आस्थालाई न्यानो लुगा - Pokhara Sports
Pingback: खेलकुदकी छोरी ‘सन्ध्या’लाई अस्ट्रेलियाका ड्ग ग्रान्टको सहयोग - Pokhara Sports
पोखरामा प्याराग्लाइडिङको सोलो उडान शुरु हुने
स्व. ललित, इन्द्र तथा प्रहरी जवान बलभद्र कुंवर स्मृती बास्केटबल सम्पन्न
मनाङको टाइ ब्रेकरमा जित, ब्रिगेड द्वारा उत्कृष्ट खेल पर्दशन